रुपा कृष्णको प्रेमिल कथा बोकेको ‘रुपाकृ’ नाटक युटुबमा आयो (भिडियोसहित) - Rapti Khabar
गृहमन्त्री बादल आईजीपीसँग रुष्ट, नीति विपरीत आईजिपीले किन दिए ‘इन्काउन्टर’ को आदेश ?
मेरो रेट ५ मिनेटको ३ लाख हो, तिर्न सक्ने कोई सङ हिम्मत छ, भने आऊ : सुष्मा कार्की
कतै यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ ? त्यसोभए तपाइको आजको दिन कस्तो छ, जान्न राशिफल हेर्नुहोस
रुपा कृष्णको प्रेमिल कथा बोकेको ‘रुपाकृ’ नाटक युटुबमा आयो (भिडियोसहित)
मुख्य पृष्ठ /भिडियो/रुपा कृष्णको प्रेमिल कथा बोकेको ‘रुपाकृ’ नाटक युटुबमा आयो (भिडियोसहित)
‘कहिले हाँसो अनि कहिले आशु, कहिले सु:ख अनि कहिले दु:ख’ यी सब हर कसैको जिबनमा आईपर्दा रहेछन । त्यस्तै हाम्रो जीवनमा पनि धेरै खुसीका पलसंगै दुःखको समयलाई चित्रणगरि जिबन भोगाई नाटकको स्वरूपमा प्रदर्शन हुन आइपुगेको छ ।
‘रुपाकृ’ मन्चन भई युटुब च्यानलमा प्रदर्शन पछि रुपा र कृष्णले यसरि भाव व्यक्त गरे । यस अघिनै थियटरमा मन्चन भएको नाटकलाई यतिबेला आफ्नै अफिसियल युटुब च्यानलमा सार्बजानिक गरेका छन् ।
“माया” दुुई अक्षरले बनेको शब्द, जुन सुन्नमा जति सरल छ, त्यति त्यसको गहिराइ भेटाउन सहज छैन । नेपाली प्रेमिल जोडी “मुनामदन”को प्रेम कथा निकै कठिन क्षणहरुबाट गुज्रिएको भेटिन्छ । जहाँ मिलन बिछोडको तितो अनि मिठो अनुभब ग्रहण गर्न पाइन्छ ।
मुना र मदनको कथा आज काल्पनिक लाग्छ । त्यस्तै काल्पनिक लाग्ने ‘रुपाकृ’ प्रेम कथा घुम्ने घडीको स्वुईमा यथार्थ प्रेम कथा बोकेर हिडिरहेको छ । यो कुनै काल्पनिक होइन, सत्य हो ।
रुपा र कृष्णको प्रेमपछि अन्तरजातीय बिबाह समानताको प्रतिक थियो । बैबाहिक जिबनमा गाँसिएको केहि समयमै कृष्णले हात खुट्टा गुमाए । अपाङ्ग श्रीमानलाई सपाङ्ग बनाउन रुपाको कठोर त्याग तपस्या एक सच्चा प्रेमीको उदाहरण बन्यो । अपाङ्ग श्रीमान देखेर उनको हृदय कहिलै कम्जोर बनेन बरु अडिक र बलबान बन्यो फलस्वरुप सच्चा प्रेम संगै बाँची रहेको छ ।
रुपा र कृष्णको प्रेमलाई पहिलो पटक चिनाउने फिल्म थियो ‘बिर्खेलाई चिन्छ्स’ ।
बिर्खेलाई चिन्छ्स फिल्म सुटिंग हेर्न गएको बेला उनीहरुको पहिलो भेट भएको थियो । पहिलो भेटमै रुपाको रुपले कृष्णको मनमा घरजम गरिसकेको थियो । मन मिले तन मिल्ने न हो, अन्तत दुबैको मन मिलेपछि जिबनभर संगै जिउने र मर्ने कसम खाए ।
संगै जिउने कसम खाएका धेरै प्रेमिल जिबनहरु सफल हुँदैनन् । कोहि भौतिक रुपमै सदाको लागि छुट्टिन्छन्, कसैलाई परदेशको यात्राले प्रेमलाई टाढा बनाइ कल्पनामा एकलै जिउन बिबस बनाइ दिन्छ ।
तर यो जोडी पलभर पनि नछुटिएर संगै बस्ने छन् । बिशेषगरि रुपाको अगाढ मायामा कृष्ण अघाउन्जेल जिन्दगिभरि जिउनेछन ।
यसरि प्रदर्शन भएको थियो नाटक ‘रुपाकृ’
रुकुमका कृष्ण वलीले गएको जेठमा करेन्ट लागेर दुई हात र एक खुट्टा गुमाए । यसपछिका उनका दिन कसरी विते ? बखान गर्ने हो भने त्यो दुःखको महाभारत बन्छ ।
गरिखाने हात-खुटा नै गुमाउनु परेपछिका ति विपतमा उनकी रुपाले उनको सक्दो आडभरोसा दिइन् । उनले अशक्त पतिका तन र मनको घाउमा महल्म-पट्टी लगाइदिइन् । उपचार गर्दागर्दै ४५ लाखको ऋण लागिसकेको थियो ।
कृष्ण र रुपाको यो विलौना युट्युबमा कसैले पोखिदिए । त्यहसपछि भने उनीहरुको आँशु पुछ्न देश विदेशका नेपाली एकढिक्का भए । उनीहरुको जीवनमा खुसी फर्कियो । सबैको सद्भाव र प्रेमले उनीहरुको श्यामश्वेत जीवन सप्तरंगी भइदियो ।
झट्ट सुन्दा कुनै कुनै कथा जस्तो लाग्ने कृष्ण-रुपाको जीवनमाथि अहिले नाटक बनेको छ । गत बर्ष फाल्गुन ६ गते सोमबारदेखि प्रदर्शनमा आएको थियो । स्थान हो, कालिकास्थानस्थित सर्वनाम थिएटर । यो नाटक हरेक दिन साँझ पाँच बजेदेखि ६ बजेसम्म फाल्गुन १२ गते सम्म मञ्चन भएको थियो । फागुन ६ गतेदेखि १२ गतेसम्म मञ्चन हुने नाटकलाई रेनुका कार्कीले निर्देशन गरेका हुन् ।
‘मायाको परिभाषा नै फितलो बन्दै गएको अहिलेको अवस्थामा रुपा र कृष्णको कथा आफैमा एक आदर्श प्रेमको नमुना हुनसक्छ’ निर्देशक कार्की भन्छिन्, ‘उनीहरुको प्रेम अहिलेको समाजका निम्ति अनुकरणिय बन्न सक्छ ।’
नाटकका प्रस्तुतकर्ता हुन्, नविन अवाल । ‘बिजुली मशिन’ जस्तो अब्बल दर्जाको चलिचत्र निर्देशन गरिसकेका अवालले यो नाटकले एक ‘अमर प्रेमगाथा’ भन्ने बताएका छन् । ‘परिवारको मायाले एउटा मान्छेको जीवन कति पूर्ण र सार्थक हुन्छ भन्ने कुरा नाटकमा दर्शाइएको छ’ नविन भन्छन् ।
नाटकमा कृष्णको भूमिका सुदीपजंग कार्कीले निर्वाह गर्दैछन् । उनी यसअघि मञ्चन भएको बार्बरिक नाटकका पनि मूख्य कलाकार हुन् । उनीसँगै सुशिला बजगाईले मूख्य भूमिका निर्वाह गर्नेछिन् ।
कलाकारहरु सुनिशा बजगाईं, सुदिप जंग कार्की, सुमन कुइकेल, लकेश राई, जयराम ढकाल, सन्जु क्षेत्री, विपुल थापा मगर, राजिव जोशी, परि शाक्यले नाटकमा अभिनय गरेका छन् ।
त्यसैगरी प्राबिधिक पक्षतिर बक्स अफिसमा राजेश पौडेल, प्रकाश् परिकल्पनामा सुनिल पोख्रेल, प्रकाश् परिचालनमा कृष्ण खड्का, सङीत परिकल्पनामा उत्शव बुढाथोकि, सङीतमा बिशाल नकर्मी, बिमल लामिछाने, दिपेन्द्र थापा क्षेत्री, कृटिना राईले साथ् दिएका छन् ।
गितमा संञ्योग गुरागाईं, सुनिता बस्नेत, सुदिप जंग कार्की रहेका छन् भने अर्जुन बि .सि कोरियोगाफर गरेका छन् । मञ्च परिकल्पना जेनि सुनुवार, बिपुल थापा मगर र मञ्च व्यवस्थापनमा सुनिशा बजगाईंको भूमिका रहेको छ ।
त्यसैगरी सहायक मञ्च व्यवस्थापन जयराम ढकाल, मञ्च सामाग्री -बिपुल थापा मगर, लकेश राई, राजिव जोशी साथै भेषभुषा – सुमन कुइकेल, फोटोग्राफर-बिनोद पोख्रेल र प्रेस सल्लाहकार शिव मुखिया रहेका छन् ।